Waxa aan ka arki doonno 2010-Kusoo Baxsan - Geofumadas
Waxa aan ka arki doonno 2010
Sebtember, 2010 Microstation-Bentley, safarka
Dhowr maalmood ka hor waxaan helay martiqaad si aan uga soo qaybgalo 2010 ee la soo qaaday oo sanadkaan lagu qaban doono 19 iyo 20 bisha Oktoobar. Ma dhici doonto dhacdo Ameerika, kaliya Europe, iyo meesha ka fiican Holland, oo noocan oo kale ah tiknoolajiyadu waa ku dhowaad sawirada Yurub.
Kadastres sida Xarunta Diiwaangelinta Qaranka (CNR) ee El Salvador iyo Nidaamka Mideysan ee Diiwaangelinta (SURE) ee Honduras, waxay leeyihiin badanaa farsamadoodii farsamada ee ka shaqeeya Qadarka Nederland.
Guud ahaan General
Ajendaha waxaa loo qaybiyaa bandhigyo farshaxan ah maalinta ugu horeysa, kuwaas oo loo qaybiyay ugu yaraan afar xariiq oo isku mid ah, oo leh dhammaan jihada cusub ee lagu soo dhejiyay line-upka 12 ee Bentley uu si joogto ah u xajin lahaa:
Xukuumadda (oo ay ku jirto Cadaalad iyo Horumar Dhuleed)
Miinooyinka iyo birta
Khadadka qaybinta iyo shabakadaha
Hababka soo saarista
Madaarada iyo xarumaha khaaska ah
Sida iska cad, Bentley mawduuca GIS waa mid ka mid ah waxyaabo badan oo u heelan sigaarcabyada. Waxaa suurtogal ah in aan aragno wax aan ka aheyn qaabka aan u arki karno sannadkii hore at Symposium Symposium, Iskudhin mashruucyo badan oo Wise ah oo leh BIM qaabka XFM.
Miisaska wareegsan ee miisaanka
Dhanka kale, maalinta labaad waxaa jira maalmo mawduucyo gaar ah. Si daacadnimo ah mawduucyada ayaa u muuqda mid ciriiri ah, laakiin kaliya tani waa dhacdooyinkan, si ay u dhiirigeliso halka ay tiknoolajiyada ku shaqeynayaan injineernimada. In badan oo ka mid ah aqoonta farsamo waa farsamo iyo istaraatiijiyad, aad uga duwan wixii ka horeeyay dhacdooyinka BeAwards sababta oo ah Bentley Institute ayaa ku dhex orday tababaro siman (hadda la xiro), waxay ogaan doonaan sababta ay u aadeen qaabkan waana hubaa in ay siiyaan natiijooyin wanaagsan.
Halkan waxaan soo koobayaa jaantusyada qaar oo aan xisaabinayo ujeedooyinkooda.
ProjectWise kooxo kala duwan
Maareynta degaanka SCADA mashaariicda biyaha
Naqshadeynta dhismayaasha la isku qurxiyo
Maareyn mashaariic leh macluumaad isku dhafan
Magaalooyin mug leh oo sigaar cabbaya oo ah qaababka 3D
Injineernimada isdhexgalka akhlaaqda
Shaqo-hawleedka qaabeynta qaabdhismeedka
Noqo Lacagaha 2010
Munaasabaddan ayaa sidoo kale u oggolaanaysa xafladda abaalmarinta dadaalka cusub ee horumarinta ee fursaddooda labaad ee qaabkan.
Post Previous«Previous ... mashquul ...
Post Next La hadlida dadka reer TuentNext »
2 Jawaab ah "Waxa aan ku arki doonno Kusoo Saarista 2010"
Oh haa. Halkaas ayaan kugu aragnaa dhamaadka wiigga.
Juan ME Ruiz isagu wuxuu leeyahay:
G!, Waxaan ku arki doonaa maalmo yar